Ogeysiis: Dhamaan Jaaliyadaha Dibada ee Degaanka Somalida Ethiopia – Rasaasa News
Jan 20, 2012 ethiopia, Ogaden, Ogeysiis: Wargalin Dhamaan Jaaliyadaha Dibada ee Degaanka Somalida Ethiopia, ONLF, Somali, somali region
Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan dadweynaha iyo Jaaliyadaha degaanka Somalida Ethiopia ee ku nool dalalka Yurub, waqooyiga Maraykanka, dalalka Carabta, Afrika iyo Ustralia in la furay gal dacwadeed wada jir ah, oo la doonayo in maxkamad lagu hor keeno afar xubnood oo ka tirsan kooxda Caasmara.
Gal dacwadeedka oo ay si wada jir ah u diyaariyeen Qoysas dhibanayaal ah iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo dacwad ku oogaya 4 xubnood oo ka tirsan kooxda Caasmara ee uu hogaamiyo Maxamed Cumar Cismaan oo falal arggagixisnimo ah dad shacab ah ugu gaystay degaanka Somalida Ethiopia.
Si loo helo dhamaan dhibanayaasha ama ehelada dadka ay waxyeelada gaadhsiiyeen xubnahani, waxaa lagama maarmaan ah in la helo dhibanayaasha iyo dhibka gaadhay, si ay ugu cadeeyaan dunuubta ay gaysteen xubnahani.
Hadaba, hadii aad dhib ka sheeganayso xubnahan iyo dadkii la shaqaynayey waxaa furmay Albaab aad u mari doonto dhibka ku gaadhay, si aad cadaalad u hesho ku biir kulminta [petition].
Waxaad la xidhiidhaa guddiga uruurinta gal dacwadeedka oo aad ka heli karto dhismaha wakiilada Ethiopia u fadhiya dalalka dibada. Halkaas oo ay kugu qaabili doonaan xubno diyaarinaya xogaha dhabta ah ee gal dacwadeedka dhibanayaasha.
Magacyada xubnaha la doonayo in la horgeeyo Maxkamd ama dib dalka loogu celiyo iyo dambiyada ay galeenba waxaad ka heli doontaa warqadaha ururinta ee aad buuxin doonto.
Wixii faah faahin dheeraad ah, fadlan kala xidhiidh dhismaha danajiraha Ethiopia u fadhiya dalka aad joogto.